Akaụntụ Forex Trading
Home / trading / Nnabata / Akaụntụ Akaụntụ
Ngwa maka Akaụntụ Forex Trading ka a ga-edozi ma ọ bụrụ na Ụlọọrụ Iwu ma ọ bụ Debanye aha na-ezube imepe akaụntụ.
N'okpuru akwụkwọ nchịkọta ego nke Ụlọ Ọrụ, ị ga-ahụ ebe a kwadebere maka ịnye onye nnọchiteanya ikike, ịzụ ahịa, ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ wepụ maka onye na-achọ.
Ịmepụta Akaụntụ Ahịa Njikọ na FXCC bụ usoro kwụ ọtọ:
Biko wezuga ma mezue ihe ndị na-esonụ:
Akaụntụ Ịmepe Ọkpọgụ Ihe nbanye nke ndị ahịa Ike nke Ọkachamara nke Ụlọọrụ Mkpebi nke Board of Directors
Zuru ma laghachi ndị a tinyere ozi nkwado na-arịọ FXCC, ma site Faksị ma ọ bụ email.
faksị: + 44 203 150 1475
Ozugbo anabatara ma dezie akwụkwọ akaụntụ gị, nkọwa ngalaba nbanye gị ga-ezitere gị site na ngalaba ndekọ FXCC.
Biko jide n'aka na ị gụọ ma ghọta ihe ndị na-esonụ:
Ọrụ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ
Nkwekọrịta ndị ahịa CFD